Mila mailo : misy karazan-trondro tsy azo hanina rehefa fahavaratra | NewsMada
Mila mailo : misy karazan-trondro tsy azo hanina rehefa fahavaratra
Matetika isehoan’ny fanapoizinana avy amin’ny alalan’ny fihinanana karazan-trondro saropady rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Saika hitrangana tranga fahafatesan’olona vokatry ny fihinanana trondro hatrany, indrindra any amin’ny faritra atsimo atsinanana iny. Misy ireo karazan-trondro tsy azo hanina rehefa fahavaratra.
Misy amin’izy ireny mihinana lomotra ka mivadika ho poizina mahafaty izany rehefa tafiditra ao anatin’ny vatan’ny olombelona. Betsaka anefa ireo mponina any amorontsiraka tsy mahafantatra izay tranga izay ka mihinana hatrany, hany ka rehefa misy maty vao taitra ny mpiray tanàna.
Efa tokony ho fantatry ny tompon’andraikitra ao amin’ny jono sy ny tompon’andraikitry ny fahasalamana ireo karazan-trondro tena tsy tokony hohanina rehefa fahavaratra. Anisan’ny nanapoizina olona betsaka telo taona lasa izay ny « sardinelle » tany atsimo atsinanana.
Ireo mpivarotra trondron-dranomasina eto an-drenivohitra ihany koa milaza fa ny lohan-trondro vaventy be no tsy tokony hohanina rehefa fotoam-pahavaratra toy izao mba isorohana ny poizina ao anatin’ireny lohan-trondro ireny.